“Nateraka indray”: mijoro vavolombelon’i Kristy i Aaron Pretra | NewsMada
“Nateraka indray”: mijoro vavolombelon’i Kristy i Aaron Pretra
“Tahaka ny zaza vao teraka indray aho. Raha atao indray mijery, fiainana maloto ny fiainako rehetra taloha, raha tsy hilaza fotsiny afa-tsy ny hoe, raha atao ny atontan’isan’ny Malagasy mpisotro toaka ka mety hoe 100.000l isan-taona ny laniny, izaho no nisotro ny 5000l tamin’io. Entiko ilazana izany fa tafahoatra ny reviko. Intelo niala sigara aho taloha, saingy tsy afaka, fa rehefa nandray an’i Jesoa kosa, afaka tanteraka. Mahagaga Izy! Manova Izy!”, hoy i Aaron Pretra, namintina ny tantarany.
Mpankafy mozika rap ity tovolahy ity ary efa mpiangaly izany efa hatry ny ela. Fintininy ao anatin’ny “Nateraka indray” io tantarany io. Izany hoe, karazana fijoroana vavolombelona ity rakikirany vaovao, nivoaka ny 4 mey teo, ity. Mibahana ao anatin’ity vokatra ity ny mozika rap, saingy arahina tononkira midera an’Andriamanitra. “Nateraka indray ny fiainako! Taloha, rima maloto no nataoko tamin’ny rap, ankehitriny kosa, rima ara-pilazantsara”, hoy izy.
“Inoako fa efa nomanin’Andriamanitra izy ity vao niova fo aho”, hoy izy. Nanomboka ny taona 2010 ny nanomanana ny “Nateraka indray”, teo amin’ny lafiny ara-panahy. Ny fiandohan’ny taona 2018 kosa vao nanomboka nanoratra ny tonony izy ary niditra trano fandraisam-peo.
Hosantarina any Antsirabe ny fampahafantarana ny rakikira vaovao. Ny voalohany, ny 21 jona, ao amin’ny La Palette, ny faharoa kosa ny 22 jona, ao amin’ny Alliance française ao an-toerana.